Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Obodo 2021 kacha mma na United States iji mee ememme nke anọ nke ọnwa Julaị
Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
O yikarịrị ka ndị mmadụ na-ezukọta maka ezumike n'afọ a, ebe nhapụ mmekọrịta ọha na eze bụ ụkpụrụ afọ gara aga.
Ndị America nde 48 ga-aga 50 kilomita site n'ụlọ maka 4th nke July.
Ndị America na-eme atụmatụ imefu ijeri $ 7.5 na 4th nke July nri.
64% nke ndị America na-eche na enweghị ego nọrọ na nke a 4 nke July.
Ndị America na-eme atụmatụ na-etinye ọnụ $ 7.5 na 4th nke ememe July nke afọ a, ndị ọkachamara njem taa wepụtara akụkọ na 2021 Ebe Kachasị Mma & Kasị njọ maka Ememme Afọ 4 nke July, yana akụkọ ndị na-atọ ụtọ banyere ezumike na Coronavirus na 4th nke July Survey.
Iji chọpụta ebe kachasị mma iji mee ememme kachasị kpakpando, ndị ọkachamara jiri obodo 100 kachasị ukwuu na United States dabere na otu ha si emefu ego ezumike na ntụrụndụ. Nchịkọta data nke ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ nke 23 sitere na nkezi biya biya na ọnụ ahịa mmanya ruo oge nke ọkụ ọkụ na-egosi na ihu igwe ihu igwe nke anọ nke July.
Obodo kacha mma iji mee ememme nke anọ nke ọnwa Julaị
1. New York, NY 11. Ọhụrụ Orleans, LA
2. San Francisco, AKA 12. Las Vegas, NV
3. Azụmaahịa, IL 13. Buffalo, NY
4. Minneapolis, MN Uzoamaka Ibekwe
6. Los Angeles, AKA St. Louis, MO
9. San Diego, Ca 19. Nkọwa, TX
Ofbọchị nke 4 nke eziokwu na ihe osise
$ 7.5 ijeri: Ọnụ ọgụgụ ndị America na-eme atụmatụ iji 4th nke July nri.
150 nde: Ọnụ ọgụgụ nkịta dị ọkụ riri nke ọ bụla 4th nke July.
$ 1.4 + ijeri: Ọnụ ọgụgụ ndị America na-eme atụmatụ iji 4th nke July biya na mmanya.
80%: Share nke obodo ezimezi oku ngosipụta na-kagbuo na 2020 n'ihi ọrịa.
$ 1.5 + ijeri: Atụmatụ ego e mere na oku oku na 2020 (73% nke ihe ọkụ ọkụ na-emerụ ahụ na-eme n'ime otu ọnwa nke July 4).
$ 6.7 nde: Uru ọkọlọtọ ndị America na-ebubata kwa afọ.
48 nde: Onu ogugu ndi mmadu na-eme njem 50 + kilomita site na ulo maka 4th nke July.
Nchọpụta Key Survey
Njem na-ewere. 37% karịa ndị America ga-eme njem na 4 nke July a ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga.
Igwe ọkụ anaghị adị mkpa. 62% nke ndị America echeghị na ndị ọchịchị obodo kwesịrị iji ụtụ isi na-atụ ụtụ maka ihe ọkụkụ gosipụtara afọ a.
Na-ekwupụta nnwere onwe ego. 64% nke ndị America na-eche na enweghị ego nọrọ na nke a 4 nke July.
Ichekwa ego. 62% nke ndị America kwenyere na ịchekwa ego bụ ịhụ mba n'anya karịa itinye ya.
More Independbọchị Mwere Onwe. 36% nke ndị America na-etinye ego karịa na nke a na July 4 ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga.
Ihe dị ka 36% nke ndị America na-eme atụmatụ itinyekwu ego na 4th nke ọnwa Julaị afọ a ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Nke ahụ na-egosi na o yikarịrị ka ndị mmadụ na-ezukọta maka ezumike n'afọ a, ebe nhapụ mmekọrịta ọha bụ ihe zuru oke n'afọ gara aga. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ nwere nkụda mmụọ ịga njem n'afọ gara aga maka 4th nke July, 37% karịa ndị America ga-eme njem n'afọ a.
Ozi na-agba ume bụ na 64% nke ndị America na-eche nnwere onwe ego 4th nke Julaị, nke gosipụtara na anyị na-agbake na mbibi nke ọrịa ọgbụgba COVID-19 mebiri. Na-enweghị usoro mkpali niile gọọmentị na-akwado iji kwado ndị mmadụ na obere azụmaahịa, ọnụọgụ ndị mmadụ na-enwe nnwere onwe ego nwere ike ịdị obere.
Ihe dịka 62% nke ndị America kwenyere na ịchekwa ego bụ ịhụ mba n'anya karịa itinye ya ugbu a, nke nwere ezi uche n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ kpochapụrụ ego ha site na ọrịa ahụ. Ndị na-ewughachi ego ha nwere ike ịdabere na nkwado sitere na gọọmentị, nke na-ewepụtakwu akụ maka mba ahụ maka ihe ndị ọzọ dị mkpa, dị ka ahụike ọha na eze na akụrụngwa. Imefu ego nwekwara ike ịbụ ịhụ mba n'anya n'agbanyeghị na ọ na-akpali akụ na ụba ma na-enyere mba ahụ aka ito eto.
Ihe dị ka 62% nke ndị America anaghị eche na gọọmentị ime obodo kwesịrị iji ụtụ isi na-atụ ụtụ ego iji nweta ego ezimezi ọkụ gosipụtara 4 ath nke July. Ọ bụ ezie na a na-ewere ha dị ka ihe dị mkpa nke 4th nke ememme July, ọkụ ọkụ bụ okomoko, ndị mmadụ ga-ahọrọ ịhụ ụtụ isi ha na-aga ihe ndị dị mkpa karị ka mba ahụ gbakere na ọrịa COVID-19.